watchOS 2.0 Beta 5, vaovao sy fahatsapana | Vaovao IPhone
Ny ho avin'ny Apple Watch dia antsoina hoe watchOS 2.0. Ny rafitra fiasa manaraka izay hatombok'i Apple miaraka amin'ny iOS 9 amin'ity fararano ity dia mitondra vaovao mahaliana ho an'ny famantaranandronao, ny sasany tonga hanamboatra bibikely sasany ary ny sasany hanisy fiasa vaovao. WatchOS 2.0 Beta 5 dia navoaka andro vitsivitsy lasa izay ary rehefa niandry ela aho dia nanapa-kevitra ny hametraka azy amin'ny famantaranandroko, na dia fantatro aza fa tsy misy ny miverina. Rehefa afaka andro maromaro nanandramana ny rafitra fiasa manaraka ho an'ny Apple Watch dia lazaiko aminao ny zavatra tsapako voalohany.
1 Dialy vaovao ho an'ny famantaranandrontsika
2 Fanavaozana ny fampiharana teratany
3 Milamina sy bateria
4 Miandry fampiharana natiora
Dialy vaovao ho an'ny famantaranandrontsika
Aza manantena vaovao be amin'ny resaka sehatra izay nomanin'i Apple ho an'ny Apple Watch, na dia marina aza fa ireo izay tafiditra ao amin'ny vaovao dia tsara tarehy, na dia tsy mahomby aza. Ny safidy vaovao hampidirina ny sary TimeLapse ho famantaranandro dia tena mahafinaritra ary misy fiantraikany amin'ireo mampiseho azy ireo. Miaraka amin'ny fanavaozana vaovao aza izy ireo dia mifanaraka amin'ny ora antoandro dia jerenao koa ny Tilikambo Eiffel dia hiseho hazavana raha amin'ny alina, fa tsy amin'ny antoandro. Ny antsipiriany rehetra izay hita maso dia tena tsara, saingy tsy mijanona ny fanolorana fotoana fotsiny antsika, raha tsy misy bebe kokoa, izay kely raha tadidintsika fa manana famantaranandro isika, izay tokony hanompo zavatra hafa. Misy ihany koa ny fiovana amin'ny famantaranandro feno kokoa natolotr'i Apple antsika izay miseho miaraka amin'ny loko isan-karazany ankehitriny raha tadiavintsika izany.
Dingana kely kokoa nefa toa tsy ampy amiko izany, satria tiako ny Apple hanokatra ny tanany ary hamela ireo mpamorona hanisy dialy vaovao ho an'ny famantaranandrontsika. Heveriko fa zavatra ho avy izany, na dia tsy maintsy miandry am-paharetana aza ny fahalalana ireo avy any Cupertino. Ny zavatra ho avy tsy ho ela ary ho zava-baovao dia ny fahasarotana vaovao amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo. Ireo entana madinidinika izay miaraka amin'ny famantaranandro (batterie, kalandrie, hetsika ...) dia azo ovaina ary ahitàna ny hafa avy amin'ny rindranasa hafa, zavatra iray izay tsy azo ferana intsony amin'ireo natolotr'i Apple. Ho plus plus tena ilaina io ary antenaiko fa horaisin'ny fampiharana voalohany.
Fanavaozana ny fampiharana teratany
Ny fampiharana izay manova be indrindra dia ny Music. Izy io dia mizatra amin'ny Apple Music vaovao ary mihavao kely ny interface. Izy io koa dia ahitana ny mety hanombohana ny playback tampoka, tsy mila mivezivezy amin'ny menus hisafidianana ny lisitra na rakikira tadiavinao. Siri dia misy koa fiasa vaovao ary lasa "marani-tsaina" noho izay ao amin'ny watchOS 1. Na izany aza, mbola miandry ny mpanampy virtoaly an'i Apple hahatratra ny olon-dehibe izy ary hahatratra ny fahamatorana sahaza azy.
Ny famantaranandro koa havaozina amin'ny asany, tsy amin'ny hatsarany ihany miaraka amin'ireo diala vaovao. Miseho «maody latabatra am-pandriana» vaovao, mety tsara amin'ny famelana ny famantaranandro eo ambony latabatra rehefa mandoa vola. Rehefa apetraka marindrano dia asehony antsika ny fotoana hitanao amin'ny sary lohateny, ary mety raha ampiasaina amin'ny famantaranandro fanairana. Azo ahemotra na esorina ny fanairana amin'ny alàlan'ny bokotra eo an-tampony, ary minitra alohan'ny hanenoan'ny fanairana dia hazava ny famantaranandro, mba hilamina kokoa ny fifohazanao. Raha te-hahita ny fotoana amin'ny alina fotsiny ianao amin'ny fikasihana ny famantaranandro dia miseho eo amin'ny efijery.
Milamina sy bateria
Tsy misy olana lehibe momba ny fitoniana, saingy nahatsikaritra fianjerana sasany tamin'ny antoko fahatelo aho, mazava ho azy fa tsy mbola nohamarinina ho an'ny rafitra fiasa vaovao. Raha vantany vao niverina ny famantaranandroko nefa tsy nahalala ny antony, fa amin'ny ankapobeny, rafitra tsy miovaova izy io, na dia raisina aza fa Beta izany.
Ara-dalàna ny fiainana bateria, tsy hitako ny fanatsarana raha oharina amin'ny watchOS 1 na ny fihenany. Rehefa afaka andro maromaro sTsy afaka mankamin'ny alina amin'ny antsasaky ny bateriko aho, somary miakatra kely na midina kely, arakaraka ny andro fiasa izay nanananao.
Miandry fampiharana natiora
Fa ny tena ho lasa plus ho an'ny Apple Watch dia ny fahatongavan'ireo rindran-tany zanatany. Ny mpamorona dia afaka mamorona rindranasa tena izy izay napetraka ao amin'ny Apple Watch (tadidio fa manana tahiry 8GB izy) ary noho izany dia tsy miankina amin'ny iPhone amin'ny zava-drehetra. Hihatsara ny hafainganam-pandeha sy ny fiasan-dàlanaIzy ireo koa dia ho afaka hampiasa sensor an'ny fiambenana, izay hampitombo ny fahafaha-manolotra arosony antsika. Tsy isalasalana fa ity no fanovana izay tena mahatonga ny Apple Watch hiakatra dingana marobe amin'ny fanombanana ireo mpampiasa, fa noho izany dia mbola hiandry hatramin'ny faran'ny taona ihany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » watchOS 2.0 Beta 5, vaovao sy fahatsapana
Apple dia namoaka doka vaovao ho an'ny fampielezan-kevitra "Raha tsy iPhone, tsy iPhone"
Apple dia namoaka doka vaovao momba ny iPhone 6: "Sary sy horonan-tsary"